Sidee loo kala sheegaa inuu ninku ku jecel yahay | Ragga Stylish
Waxaa jira calaamado ama tilmaamo badan oo u adeega tilmaam ahaan in la ogaado haddii nin kaa helo. Si kastaba ha noqotee, xitaa iyada oo aan la socon dhammaan caqliga oo na dhiirrigelinaya ayaan soo koobi karnaa sida ugu wax ku oolsan ma khaldami karno.
Waxaa jira rag aan aqoon sida loo muujiyo dareenkooda ama runtii ma hubo inay ku socdaan jihada saxda ah, markaa shaki ayaa soo ifbaxaya isla marka uu xiriirku bilowdo ama uu jiro fudeyd saaxiibtinnimo. Sabab kasta ha noqotee ama maxaa yeelay waxaad dareentaa xoogaa xiise ah, halkan waxaa ku yaal tilmaamo.
1 Sidee ku ogaan kartaa inuu ninku ku jecel yahay?
1.1 Jagada jidhkiisu siinayo isaga
1.2 Isha indhaha
1.3 Marka uu jiro xiriir jidh ahaaneed
2 Faahfaahin kale oo iyana muhiim ah
Sidee ku ogaan kartaa inuu ninku ku jecel yahay?
Shakiga ama hubin la'aantu waxay si isku mid ah ugu muuqdaan dumarka iyo ragga soo jiita ragga kale. In kasta oo calaamadaha oo aad u muuqda xaalado badan, had iyo jeer waxaa jira kuwa kuuskuus ama dhibaatooyin yaryar si loo garto inuu ku jecel yahay iyo in kale.
Jagada jidhkiisu siinayo isaga
Waa waxa aan ugu yeeray luqadda jirka Waana haddii aan ognahay sida uu u muujiyo, sida uu u dhaqaaqo ama waxa uu jidhkiisu qaato, waxaan ku dhowaan karnaa waxa uu damacsan yahay. Daraasad laga sameeyay ragga iyo dumarka, waxaa la muujiyay in dumarka markaan daneyno qof kale waxaan abuurnay ilaa 52 tilmaamood, ninka kaliya 10 dhaqdhaqaaq.
Goorma jirka ninku wax badan ayuu u janjeeraa qof taas ayaa ku xiiseysa, taasi waa calaamad. Maxaa intaa dheer, fiiri meesha ay cagahoodu taagan yihiin, kan garbahaaga iyo miskaha haddii ay u jeedaan qofkaas markaa waa haa.
Calaamadaha badan ayaa ah marka nin badanaa wuxuu fadhiyaa lugaha oo kala fidsan iyo gacmaha miskaha. Maya marna ka jeesan maayo qofkaas xitaa wax badan baa fiirin doona. Waxa kale oo uu ku samayn doonaa isagoo ku soo dhowaanaya iyo wuxuu si gaar ah u daryeeli doonaa waxa la sheegayo. Xitaa ogaysii goorta waxaad rabtaa inaad si joogto ah u waafajiso y taabato timaheeda waqti ka waqti, kuwani sidoo kale waa astaamo.
Xaqiiqdii nin xiise leh waligiis wax badan buu eegi doonaa. Laakiin ha ku qaldin qof xishood leh maadaama xaalado badan uusan eegi karin maxaa yeelay wuu ka xishoonayaa haddii lagu qabto isagoo daawanaya. Waad ogaan kartaa heerka dulsaarkaaga sameynta kormeerkan- Indhaha ku fiiri ilbiriqsiyo yar sugna inaad aragto sida uu u dhaqmo. Markuu eegay, indhahaaga ka qaad ilbiriqsi keliya oo indhahana mar kale fiiri.
Haddii aad sii eegto, waa sababta oo ah xiisaha weyn. Hadduu isaguna eegay bushimahaaga, waxay la macno tahay dareemid xamaasad. Laakiin haddii aad si dhakhso leh u eegto waxaa sidoo kale jiri doona xiiso weyn. Haddiise uu gadaal ka riixo oo uu markale ku fiiriyo markaa rabitaan baa jira. Haddii uusan jirin xiriir isha ah oo wiilku si dabiici ah u eego, waxaan ka hadlaynaa wax aan xiiso lahayn.
Marka uu jiro xiriir jidh ahaaneed
Qodobkani waa mid aad muhiim u ah oo dhinacyo badan ayaa halkan ka soo qaadan doona. Haddii aadan wada joogin oo si lama filaan ah ayaad isugu soo dhowaaneysaa, waxay had iyo jeer heli doontaa hab lagu ilaaliyo xiriirka jirka, Ama salaaxid yar oo gacanta ah, ayuu ku taabanayaa dhexdaada ama wuxuu kuu keenayaa gacantiisa gacanta. Waxaa jira faahfaahin kale oo yar sida gacantiisa saar korkaaga iyadoo marmarsiiyo laga dhiganayo daqiiqad qosol ah ama goorma salaantaada iyo macasalaamayntaadu aad bay u jecel yihiin, oo habsiin weyn leh.
Hadday tahay wiil xishood leh dabcan kuma dhiiran doono inuu sameeyo mid ka mid ah tilmaamahan. Xaaladdan oo kale, waxaad noqon kartaa mid ka mid ah in ay qaadaan tallaabadaas si aad u ogaato sida uu u dhaqmo. Haddii uu naxsan yahay oo aanu doonayn inuu ka qayb galo, ha argagixin, waxay noqon doontaa xishoodkiisa darteed. Si kastaba ha noqotee, fiiri faahfaahinta dambe iyo kuwa kor ku xusan.
Faahfaahin kale oo iyana muhiim ah
Sida aan dib u eegnay dareenkaaga oo dhan wuxuu diirada saarayaa qofka aad jeceshahay. Ma awoodi doontid inaad iska ilaaliso ka saar dhoola cadeynta joogtada ah wajigaaga, xitaa haddii indhuhu si dhakhso leh u kulmaan wuu dhoola cadeynayaa.
Sida caadiga ah ma caawin karto laakiin fiirinta bushimaha qofkaas, ma awoodi doontid inaad fiiriso indhaha laakiin waxaad eegtaa afka. Waa calaamad cad oo cad, in kastoo ay jirto dadka kuwaas oo aan awoodin inay fiiriyaan indhaha una jeediyaan indhahooda qaybaha kale ee wejiga.
Inta wadahadalka lagu jiro markasta xiiseyn doonaa inaan ogaado sida aad dareemeyso, Maadaama ay kuxirantahay sida aad tahay, waxay ahaan doontaa adeeggaaga si loo ogaado sida laguu caawiyo. Intaas ka sokow waxay kaa buuxin doontaa amaan badan iyo wuxuu raadin doonaa inuu yeesho qodobo badan oo adiga kula mid ah. Qaybtani waa mid aad loogu qanco maxaa yeelay haddii aad runti isku fikir tihiin waxaad yeelan kartaa xiriir weyn.
Haddii aadan weli caddayn faahfaahintaas oo dhan iyo ninka aad jeceshahay, waxaad had iyo jeer isku dayi kartaa inaad adigu tilaabada adigu qaado. Haddii aadan khatar galin, abaalmarinta waxaa laga yaabaa inaysan jirin, waxaana fiican inaad ka qoomameyso inaad sameyso wax u qalma ama aan ahayn, intii aad ka qoomameyn laheyd inaadan sameyn. Si aad u awoodo inaad waxbadan ka akhriso sida loo shukaansado waxaad arki kartaa “sida loogu shukaansado internetkaThetilmaamaha ugu fiican ee lagu barto sida loo galo gabadha".
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Sida loo ogaado haddii ninku ku jecel yahay